अमेरिकी राजधानी कोभिड -१९ को हटस्पट बन्न सक्ने अधिकारीहरुको चेतावनी - Enepalese.com
वासिड.टन डिसी, भर्जिनिया र मेरील्याण्डमा कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या नौ हजार, दुइसय बढीको मृत्यु
यादवराज जोशी २०७६ चैत २६ गते ०:०५ मा प्रकाशित
अमेरिकाको राजधानी वासिड.टन डिसीमा कोरोना भाईरसको संक्रमण बढन सक्ने चेतावनी अधिकारीहरुले दिएका छन् । वासिड.टन डिसी कोभिड १९ को हट स्पट बन्न सक्छ । “मैले यो बारेमा राष्ट्रपति र डा. ब्रिक्सलाई बताई सकेको छु,” डिसीका मेयर मुरियल ब्राउजरलाई उदृत गर्दै डिसिस्ट अनलाईनले लेखेको छ ।
गत सातादेखि चिकित्सकहरुले वासिड.टन डिसी लगायत मायामी, न्यूओर्लियन्स, लस एन्जल्स, ह्युस्टन, शिकागो, एटलान्टामा कोभिड १९ को प्रकोप बढन सक्ने चेतावनी दिदै आएका थिए । अमेरिकामा मंगलबार कोभिड १९ को संक्रमण निकै बढेको छ । २८ हजार नयाँ संक्रमति सहित अमेरिकामा कोभिड १९ पोजिटीभको संख्या तीनलाख ९५ हजार पुगेको छ । मंगलबार कोभिड १९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्मकै सर्वाधिक १९ सय छ । अमेरिकामा कोभिड १९ बाट करिव १३ हजारको मृत्यु भैसकेको छ ।
वासिड.टन डिसी, भर्जिनिया र मेरील्याण्डमा कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या नौ हजार पुगेको छ भने करिव दुइसयको मृत्यु भैसकेको छ । मंगलबार साँझ आठ बजेसम्म वासिड.टन डिसी, मेरील्याण्ड र भर्जिनियामा कोरोना भाईरसको नयाँ संक्रमण क्रमशः एकसय १४, तीनसय २६ र चारसय ५५ छ ।
मेरील्याण्डमा आज एक दिनमै २४ जनाको मृत्यु भएको छ । “वासिड.टन डिसी क्षेत्र संभवत कोभिड १९ को नयाँ हट स्पट बन्ने खतरा छ,” मेरील्याण्डका गर्भनर लारी होगानले भने । डा. डोबराह ब्रिक्सका अनुसार, कोलोराडो, पेन्सिलभानिया र वासिड.टन डिसी संक्रमण बढन सक्ने क्षेत्र हुन ।
वासिड.टन डिसीमा पहिलो कोभिड १९ को बिरामी मार्च ७ मा फेला परेको थियो भने पहिलो बिरामीको मृत्यु मार्च २० मा भएको थियो । विगत २४ घन्टामा वासिड.टन डिसी क्षेत्रमा कोभिड १९ को संक्रमण निकै बढेको छ ।
“विगत दुई सातालाई हेर्नु भयो भने एकसय नयाँ संक्रमति थियो । अहिले नयाँ संक्रमण एकहजार र मृत्यु हुनेको संख्या २० भन्दा बढी छ । यो बढने दरले भयावह स्थिती देखाउछ,” जर्ज वासिड.टन विश्वविद्यालयका महामारी विज्ञ एमण्डा क्यासेलले भनिन ।